Global Voices teny Malagasy » Fantaro i Lokosh (Joshua D. Hinson), mpampiantrano ny kaonty Twitter-n’ny @NativeLangsTech ny 3-9 Oktobra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2019 9:17 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika imanoela fifaliana
Lokosh (Joshua D. Hinson), Chickasaw / Choctaw / Mvskoke Creek / Cherokee / Eoropeana-Amerikana, olom-pirenen'i Chickasaw. Sary avy amin'i Ryan RedCorn, Osage.
Ny taona 2019, ao anatin’ny hetsipanentanana anaty tambajotra sosialy ho fankalazana ny fahasamihafàn'ny teny anaty Aterineto , hifandimby hitantana ny kaonty Twittern-n'ny @NativeLangsTech  ireo mpikatroka sy mpiaro ny tenin'ny Amerindiana sy ny an'ireo Firenena Voalohany mba hizaràna ireo zavatra niainany tamin'ny famelomana indray sy ny fampiroboroboana ny Tenin'ireo Amerindiana sy ireo Firenena Voalohany. Miresaka ny mombamomba an'i Lokosh (Joshua D. Hinson) (@lokosh_saya  sy i @chikashshanompa ) sy ny zavatra kasainy ho resahina mikasika ity herinandro ity amin'ny maha mpampiantrano azy ity lahatsoratra fampahafantarana ity.
Rising Voices: Mba lazalazao aminay ny momba anao.
Lokosh no anarako (Joshua D. Hinson) ary lehiben'ny Fandaharanasa Famelomana Indray ny Teny Chichasaw  aho. Ekipa kely ahitàna olona roambinifolo eo izahay, izay miasa tontolo andro amin'ny famelomana indray ny teny. Miara-miasa akaiky amin'ny Kaomitin'ny teny Chickasaw izahay, kaomitin'olona miisa 25 izay ahitàna teratany mampiasa ny teny Chikashshanompa (teny Chickasaw). Natsangana tamin'ny 2007 ity fandaharanasanay ity. Manolotra karazanà fandaharana fampianarana teny izahay, isan'izany ireo asa fampilonana ireo olon-dehibe sy ireo hetsika fanatevenam-pahaizana ho an'ireo mpianatra anatin'ny sokajin-taona rehetra.
RV: Manao ahoana ny toetry ny tenim-pirenenao ao anaty aterineto sy ivelany?
Manana teratany dimampolo miteny ny Chikashshanompa’ mbola velona izahay, ary mpianatra miisa 7.000 eo miditra amin'ny fandaharanasanay mandritra ny taona voafaritra. Mibitsika momba ny Chikashshanompa’ ao amin'ny @chikashshanompa aho ary lasa hita manerana ny Facebook ao amin'ny pejin'ny vondrompiarahamonina We Speak Chickasaw ilay teny.
RV: Inona ireo lohahevitra kasainao hifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech?
Ny toerana misy ny teny Chikashshanompa’ akehitriny, izay ahitàna ireo ezaka famelomana maro. Ny làlana nizorako mba hahafehezana ny Chikashshanompa’. Ireo fanamby sy zava-tsarotra amin'ny famelomana indray ny teny amin'ny toejavatra misy aty aminay. Ireo fanantenana amin'ny hoavy. Ohatra anà teny vitsivitsy. Sns.
Manolo-tena hanao izay rehetra vitanay izahay mba hijanona ho teny mavitrika, miaina, ary mihetsiketsika ny Chikashshanompa’ ary tafiditra ao anatin'izany ny fanitarana ilay teny amin'ny sehatra vaovao toy ny aterineto sy ny tambajotra sosialy. Maniry ny hihaona amin'ireo vahoakanay any amin'ny toerana misy azy ireo, manerana izao tontolo izao, izahay ary matetika izany dia midika fitadiavana vahaolana ara-teknolojika amin'ny olana iray izay tena olana amin'ny mahaolombelona, dia ny fahaverezan'ny teny izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/31/143670/
 ny hetsipanentanana anaty tambajotra sosialy ho fankalazana ny fahasamihafàn'ny teny anaty Aterineto: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/05/13/a-new-rotating-twitter-campaign-nativelangstech-will-amplify-the-voices-of-native-language-activists/
 Fandaharanasa Famelomana Indray ny Teny Chichasaw: https://www.chickasaw.net/Services/Chickasaw-Language-Revitalization-Program.aspx